Tiki-Taka-dii Puntland, Ruuxiiyadii Banaadir iyo taageereyaal la ciir ciirkii Koonis….Ka bogo shan wax yaabood oo laga bartay ilaa iyo hada tartanka dawlad gobolleedyada Soomaaliya – Gool FM
Tiki-Taka-dii Puntland, Ruuxiiyadii Banaadir iyo taageereyaal la ciir ciirkii Koonis….Ka bogo shan wax yaabood oo laga bartay ilaa iyo hada tartanka dawlad gobolleedyada Soomaaliya
Kaafi July 19, 2016
(Muqdisho) 19 Luulyo 2016. Tartanka Dawlad gobolleedyada Soomaaliya ayaa si habsami leh uga soo soconaya gegida Banaadir ee caasimadda dalka.
Waxa uu haatan soo gaarin qeybigii dambe ee heerka Group-yada oo maalinta berri ah la soo xiri doono.
Hadaba iyada oo ay Banaadir iyo Puntland u soo gudbeen nus dhamaadka hadana waxaa arbacada la heli doonaa laba kale sida Shabeellaaha dhexe/Hiiraan, Jubaland ama Galmudug.
Hadaba ilaa iyo haatan shan wax yabaood oo laga bartay ayaan eegi doonaa.
1).RUUXIYADDA CIYAARYAHANADA BANAADIR
Da’yarta mataleysay Gobolka Banaadir waxa ay labadii kulan ee ay dheeleen la soo shir tageen kubadd aad loola yaabay marka laga eego adaabta kaartada iyo fahanka naqshada uu soo jeexay tababarahooda.
Kulankii kowaad ee ay ku xaaqeen 5-ta gool Koonfur Galbeed waxa ay ciyaareen dheel ku saleysan daba maryeen taas oo loo fahmay in aysan wax badan ka aqoon kuwa ka soo horjeeday waxa ayna rabeen la qabsigooda iyo nidaamkii ay u dheleeyaeen, laakiin, kulankii Puntland wax badan ayay ka badaleen kaartada.
Bilow ilaa dhamaad waxa ay ahaayeen duulaan raba in ay jabiyaan daafaca Puntland, waxaa taas ay gorfeeyeyaasha ku tilmaameen in Banaadir ay ogeyd in Puntland daawatay kulankii hore ayna ka filayeen fahanka ciyaartooda ku dhisan daba maryeen, markaa waxa ay ahayd kaarto badal.
Yeelkeede, Puntland oo lafteeda ahayd mid aan gadaal ku gaban ayaa laba jeer kala hor martay goolasha Banaadir balse waxaa heer sare ahaa ruuxiyada day’yarta caasimadda oo jawaabo deg deg ah bixinayey kuna sigtay in ay guusha la hawdaan.
2). Tki-Taka-dii Puntland
Xulka u ciyaaray Puntland labadii kulan ee la soo dheelay Group-A, waxa ay rajo badan galisay dadka soomaaliyeed eek u nool caasimadda iyo guud ahaan dalka.
Markii hore waxaa jirtay aragti ahayd in gobolladda soomaaliya aan kubadd hibo laga dheelin balse Caasimadda iyo deeganada koonfureed tahay xudunta dheesha!
Hase yeshee, goobjoogeyaashii gegida Koonis toddobaadkan muuqaal kaas ka badalan ayaa u baxay, Puntland waxaa lagu tilmaamii karaa mashiin hibo soo saar leh; tusaale, 2010 tartankii Gobolladda ee lagu martigaliyey Mire Awaare, Garowe, deeganadda Puntland waxaa lagu arkay xiddigo caajiib ahaa sida Zaki Cali Mankaas (Cali Mankaash waxa uu ahaa weeraryahankii halista badnaaa ee gobolka Togdheer berisamaadkii), Samiir iyo daacad oo hadaba ka dheela horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya, hada waxa ay ku duulayaan Cabdisalaan Dhiidhiye oo ilaa hada lagu qiimeenayao mid ka mida ciyaaryahanada tartanka, Siciid dheer iyo Yacquub.
Taas waxaa u dheer in kubadda ay la soo shirtageen tahay mid lagu tilmaamo karo TIKI-TAKA oo ay weheliso awood jireed.
3). Xaamashada Koonis
Gegida Koonis waxa ay marti u tahay xumad xamaashadeed oo ka dhex jirta mucaashiqiinta kubadda cagta ee soomaaliiyeed.
Wali malaha lama arag tan iyo bur burkii Dawladdi dhexe ee Soomaaliya farxad, rayn reyn iyo muxubo sidan oo kale soomaali ugu dhex marta isla bugcada ay astaanka u leeyihiin ee Muqdisho.
Kulankii Galmadug v Jubaland waxa uu reebay raad farxadeed madaama gegida Koonis uu la ciir ciiray jamaahiir u siman mashxarada kaddibna is marxabeeyey balse waxaa liqay kulankii maanta ee lagu tilmaamay Somalia Derby! Xitaa waxaa laga daawanayey dabaqyada ku heereysan garoonka markii meel la kala is taago ka waayey gegida, Axyaa wadani, maanta goobjoog ayaan u noqday XAMAASHAD SOOMAALIYEYSAN.
4).Shabeellaha dhexe/Hiiraan iyo Galmudug tartankan waxaa ugu filan cibro qaadasho
Walow la dhihi karo Galmudug iyo Shabeellaha dhexe/Hiiraan waa lagu kadiyey curashada tartanka hadana waxaa dhaliil ugu filan in xulalkii ay la yimaadeen uu muran dhexdooda ah hareeyo.
Walow aan wali si rasmi ah loo shaacin khilaafaadka midba iskii u haysta hadana waxaa ay taageereyaasha arkeen kulamo loo daahiyo is qab qabsi ka dhex jira safafka ay la yimaaadeen labada gobo lee aan xusnay.
Tartankan kan xiga, waxaa la filayaa in ay yimaadeen iyana oo sidan ka wanaagsan.
5). Jubaland waxaa saaran caadaadiskii halyeyaddii Jubadda Hoose
Maamul gobolleedka Jubaland waxa ay markii hore ka mid ahayd kuwa loo saadaalinayey tartanka waliba wey ka horreyeen Puntland, balse hada, malaha Banaadir iyo Puntland ayaa leh saadaasha.
Sababta Jubaland loogu saadaalinayey tartanka waxa ay ahayd guulihii taariikhiga ahaa ee ay hore Soomaaliya uga soo hoyeen Jubadda Hoose balse waxaa la arkaa in hada caadaadiska uu ka sayid caleeyey wiilasha xeebta calanyey iyo xaafada Aargo!
Sawiradda waxaa wada qaaday: Hussein Hadaafoow, Maxamed Xuseen Qalinle, Abdulaahi Daahir Siyaas dhakoos, iyo Mahad shariif.
1-km ma u soo dabaalatay si aad SAWIR ula gasho geesigaad taageerto dabadeed MOPILE-kii biyo makaa galeen….(Aqri QISADAN dhex martay Messi iyo taageere Suli)+SAWIRRO